နှာပိတ်တာကို ( ၁၅ ) မိနစ်အတွင်း ပျောက်ကင်းအောင် ပြုလုပ်နည်း...! - Thadin
HomeHEALTHYနှာပိတ်တာကို ( ၁၅ ) မိနစ်အတွင်း ပျောက်ကင်းအောင် ပြုလုပ်နည်း…!
နှာပိတ်တာကို ( ၁၅ ) မိနစ်အတွင်း ပျောက်ကင်းအောင် ပြုလုပ်နည်း…!
May 18, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on နှာပိတ်တာကို ( ၁၅ ) မိနစ်အတွင်း ပျောက်ကင်းအောင် ပြုလုပ်နည်း…!
ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ တစ်မိနစ်လောက်ကြာအောင်နှိပ်ပါ။ဒီနှိပ်နယ်မှုက သင့်ရဲ့နှာရည်အပေါ်ဒီလိုသက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။
သင့်နှာခေါင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို သင့်လက်ညှိုး၊ လက်ခလယ်နဲ့ ၁-၂မိနစ်လော်ကြာအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းပေးပါ။ဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်ရင်သင့်နှာခေါင်းဝင်ထွက်ပေါက်ကိုပွင့်ဖို့ကူညီပေးမှာဖြစ်ပြီး သင့်နှာခေါင်းကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အပေါ်နှုတ်ခမ်းနဲ့နှာခေါင်းကြားနေရာကို ၂-၃မိနစ်ကြာအောင် နှိပ်နယ်ပေးပါ။ဒီနည်းလမ်းက သင့်နှာခေါင်းကိုပွင့်ဖို့ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လေထုအစိုဓာတ်က ၄၀ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းမယ်ဆိုရင် သင့်နှာခေါင်းထဲမှာ နှာရည်တွေခြောက်ပြီးတော့ အသက်ရှုဖို့အခက်အခဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့နှာရည်ကလည်းများပြီး လေထုအစိုဓာတ်ကလည်းနည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပြင်းထန်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပြန့်ပွားမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သင့်တင့်တဲ့ အစိုဓာတ်ကတော့ ၄၀နဲ့ ၆၀ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဝတ်နွေးနွေးကိုယူပါ။မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ထဲမှာထည့်ပြီးနွေးအောင်လုပ်လို့ရသလို ရေနွေးထဲမှာစိမ်ပြီးတော့ နွေးအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။သိပ်ပြီးတော့မပူပဲနဲ့ သက်တောင့်သက်တောင့်ရှိတဲ့အပူချိန်ပဲဖြစ်ပါစေ။နှာခေါင်းထဲမှာပိတ်နေတာတွေကနှာရည်တွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နွေးအောင်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သင့်နှာခေါင်းညှစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် နှာရည်ဆေးထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါ။
၁-တကယ်လို့ ဓာတ်မတည့်တာကြောင့် နှာရည်ယိုတာဆိုရင်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတော့ မြန်လာပြီဆိုရင်တော့ သင့်နှာခေါင်းထဲကနှာရည်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်း ၁၅မိနစ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သင်ရဲ့ဓာတ်မတည့်တာတွေကိုရှင်းပစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်နည်းလမ်းတွေကိုလုပ်ပြီးပြီလဲ သင့်မှာကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းတွေရောရှိလားဆိုတာ ပြောပြပါဦး။
နှာပိတျတာကို ( ၁၅ ) မိနဈအတှငျး ပြောကျကငျးအောငျ ပွုလုပျနညျး
ဖွညျးဖွညျးလေးနဲ့ ယုံကွညျခကျြရှိရှိ တဈမိနဈလောကျကွာအောငျနှိပျပါ။ဒီနှိပျနယျမှုက သငျ့ရဲ့နှာရညျအပျေါဒီလိုသကျရောကျမှုရှိနပေါတယျ။
သငျ့နှာခေါငျးတဈဖကျတဈခကျြကို သငျ့လကျညှိုး၊ လကျခလယျနဲ့ ၁-၂မိနဈလျောကွာအောငျဖွညျးဖွညျးခငျြးတှနျးပေးပါ။ဒီလိုလုပျပေးလိုကျရငျသငျ့နှာခေါငျးဝငျထှကျပေါကျကိုပှငျ့ဖို့ကူညီပေးမှာဖွဈပွီး သငျ့နှာခေါငျးကလှယျလှယျလေးနဲ့ပှငျ့သှားမှာဖွဈပါတယျ။
သငျ့အပျေါနှုတျခမျးနဲ့နှာခေါငျးကွားနရောကို ၂-၃မိနဈကွာအောငျ နှိပျနယျပေးပါ။ဒီနညျးလမျးက သငျ့နှာခေါငျးကိုပှငျ့ဖို့ကူညီပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
လထေုအစိုဓာတျက ၄၀ရာခိုငျနှုနျးထကျနညျးမယျဆိုရငျ သငျ့နှာခေါငျးထဲမှာ နှာရညျတှခွေောကျပွီးတော့ အသကျရှုဖို့အခကျအခဲဖွဈမှာဖွဈပါတယျ။တကယျလို့နှာရညျကလညျးမြားပွီး လထေုအစိုဓာတျကလညျးနညျးနတေယျဆိုရငျတော့ ပွငျးထနျတဲ့ ဘကျတီးရီးယားပွနျ့ပှားမှုတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။သငျ့တငျ့တဲ့ အစိုဓာတျကတော့ ၄၀နဲ့ ၆၀ရာခိုငျနှုနျးပဲဖွဈပါတယျ။
အဝတျနှေးနှေးကိုယူပါ။မိုကျခရိုဝဗျေ့ထဲမှာထညျ့ပွီးနှေးအောငျလုပျလို့ရသလို ရနှေေးထဲမှာစိမျပွီးတော့ နှေးအောငျလုပျလို့ရပါတယျ။သိပျပွီးတော့မပူပဲနဲ့ သကျတောငျ့သကျတောငျ့ရှိတဲ့အပူခြိနျပဲဖွဈပါစေ။နှာခေါငျးထဲမှာပိတျနတောတှကေနှာရညျတှဖွေဈသှားမှာဖွဈပါတယျ။နှေးအောငျလုပျပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ သငျ့နှာခေါငျးညှဈတာပဲဖွဈဖွဈ နှာရညျဆေးထညျ့တာပဲဖွဈဖွဈလုပျပါ။
၁-တကယျလို့ ဓာတျမတညျ့တာကွောငျ့ နှာရညျယိုတာဆိုရငျတော့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ။
သငျ့နှလုံးခုနျနှုနျးက လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီးတော့ မွနျလာပွီဆိုရငျတော့ သငျ့နှာခေါငျးထဲကနှာရညျအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့အကြိုးသကျရောကျမှုဖွဈစပေါတယျ။လကေ့ငျြ့ခနျး ၁၅မိနဈလုပျပွီးပွီဆိုရငျတော့သငျရဲ့ဓာတျမတညျ့တာတှကေိုရှငျးပဈနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဘယျနညျးလမျးတှကေိုလုပျပွီးပွီလဲ သငျ့မှာကိုယျပိုငျနညျးလမျးတှရေောရှိလားဆိုတာ ပွောပွပါဦး။
ဖခင်ဖြစ်သူမှ သမီးအရင်း ၂ ယောက်ကို (၁)ရက်ခြားတစ်ခါ၊(၂)ရက်ခြား တစ်ခါ သားမယားပြုကျင့်…!
၁၅ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးက မွေးပြီး မြေမြှုပ်ခဲ့သည့် ကလေးကို ခွေးက ပြန်ဖော်ကယ်တင် (ရုပ်သံ)
This Month : 36933
This Year : 232331
Total Users : 591355
Views Today : 6717
Total views : 2712609